Breaking News: प्रहरी प्रमुखमा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त, सशस्त्रमा शैलेन्द्र – Gorkha Sansar
Breaking News: प्रहरी प्रमुखमा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त, सशस्त्रमा शैलेन्द्र
गोर्खा संसार २०७४, २७ चैत्र मंगलवार २०:४७
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार दोस्रोपटक बालुवाटारमा बेलुकी साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डिआईजी खनाललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्यालले चैत २८ गतेबाट ३० वर्षे उमेरहदका कारण नियमित अवकाश पाउने भएपछि नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख (आईजीपी) मा शैलेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार दोस्रोपटक बालुवाटारमा बेलुकी साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजी खनाललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको हो ।
खनाल आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा १० महिना सिनियर सशस्त्र प्रहरी अधिकृत हुन् ।
को हुन् सर्वेन्द्र खनाल ?
सर्वेन्द्र खनाल २०४६ माघमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । आफ्नो ब्याचमेटहरुमा एसएसपीबाट डिआईजीमा बढुवा हुँदा खनाल एक नम्बरमा बढुवा भएका हुन् । ‘सेलिब्रेटी अफिसर’को रुपमा चिनिएका खनाल २०७२ मा महानगरीय अपराध महाशाखको प्रमुख थिए । अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा २०७२ भदौ ३ गते उनले गुण्डा नाईके कुमार ‘घैंटे’को इन्काउन्टर गरेका थिए ।
नेपाली फुटबलको ओरालो यात्रामा ब्रेक लगाउन खनालको ठूलो योगदान रहेको छ । अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा ‘म्याच फिक्सिङ प्रकरण’मा अनुसन्धान गरेका खनालले २०७२ असोज २७ गते तत्कालिन राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापासहित ५ खेलाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएका थिए । प्रहरीले लिएको भिडियो बयानमा उनीहरुले म्याच फिक्सिङ स्विकार गरेका थिए । त्यसपछि संगठनभित्र मात्रै नभएर समाजमा पनि खनाल सेलिब्रेटी अफिसरको रुपमा चिनिएका थिए ।
देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर खेल्नेहरुले राष्ट्रघात गरेको भन्दै खनालले राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापा, विकास क्षेत्री सन्दिप राई, रितेश थापा र अन्जन क्षेत्रीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका थिए । स्टार खेलाडीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएसँगै करिब २३ बर्षपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जितेको थियो ।
अपराध महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेको एक सातामै खनालले जमिम शाह हत्याकाण्डमा संलग्न पूर्व–डिएसपी जगदिश चन्दलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । २०६६ सालमा लाजिम्पाजमा शाहको गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो ।
उपत्यकाको अपराध श्रृङ्खलामा ललितपुरको बडिखेलमा भएको ‘बडीखेल हत्याकाण्ड’ निकै चर्चित मानिन्छ । एउटै परिवारका ५ जनाको विभत्स ढंगले भएको हत्या काण्डकाको खनालले नै पर्दाफास गरेका थिए । २०६० सालमा एउटै परिवारको पाँच जनाको ज्यान लिने चन्द्रबहादुर पहरीलाई खनालले करिब १२ बर्षपछि पक्राउ गरेका थिए ।
काठमाडौंमा बस्दा खनालले अवैध कन्सल्टेन्सीमा छापा हानेर उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा समेत ल्याएका थिए ।
को हुन् शैलेन्द्र खनाल ?
नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा छिरेका शैलेन्द्र खनाल व्यवसायिक र इमान्दार अफिसरको रुपमा परिचित छन् । आफ्ना ब्याचमेटहरु नेपाल प्रहरीमा भर्खर प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) दर्जामा भए पनि खनाल सशस्त्र प्रहरी बलको बागडोर सम्हाल्ने भाग्यमानी अफिसर हुन् ।
सरकारले खनाललाई एआईजी बढुवा गरेको बेला सशस्त्रका डिआईजी उत्तम खड्का उनको बढुवाविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उपर अन्तरिम आदेश नभसँगै खनालको आईजिपी हुने बाटो तय भैसकेको थियो ।
त्यतिबेला जित बहादुर पुन खनालसँगै एआईजीमा बढुवा भएपनि उनी पदावधिका कारण घर गईसकेका छन् । त्यसैबेला पछि परेका एआईजी पुष्पराम केसी खनालभन्दा करिब १० महिना ढिला एआईजिमा बढुवा भएका थिए । यसरी आफ्ना प्रतिस्पर्धी केसी १० महिना जुनियर भएसँगै खनालले ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी बलको कमाण्ड सम्हाल्ने मौका पाएका हुन् ।
२०७५, १० फाल्गुन शुक्रबार १६:०६
२०७६, २ असार सोमबार ०९:५४
उपत्यका प्रवेशका सबै नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने ३ वटै जिल्लाका प्र.जि.अ.हरूकाे भनाइ
२०७७, २१ भाद्र आईतवार २१:४४